Bafuna kuhlehliswe esewashi - Ilanga News
Home Izindaba Bafuna kuhlehliswe esewashi
Bafuna kuhlehliswe esewashi
Bathi iNingizimu Afrika kumele itshengise ukuthi kuvulelekile ukusebenza kwezamabhizinisi
ABEMBONI yezokuvakasha sebefake ingcindezi yokuthi uMengameli Cyril Ramaphosa ahoxise umgomo wokuvalwa olawula ukuhamba kwabantu (curfew) njengoba kuvalwa unyaka u-2021.
AYAMFIMFA amathuba okuphumelela komkhankaso wabafaka ingcindezi yokuba uMengameli Cyril Ramaphosa ahoxise umgomo wesikhathi sewashi (curfew) ukwenzela ukuba abantu bakujabulele kahle ukungena onyakeni omusha. Abasembonini yezokuvakasha sebefake ingcindezi kuhulumeni, bafuna kuthi kushaya usuku lwakusasa okungolokugcina ku-2021 uMengameli Ramaphosa ebe esewuhoxisile lo mgomo.
UMnu Tyrone Seale okhulumela uMnu Ramaphosa, utshele ILANGA ukuthi akwenzeki ukuba umengameli azithathele isinqumo ngokwakhe mayelana nemigomo elawula ukuvalwa kwezwe. Uthe kuhlangana iNational Coronavirus Command Council (NCCC), yenze izincomo, bese umengameli ethatha isinqumo kususelwa kuzona. Inqwaba yabantu engahambisani nalo mgomo, isayine incwadi yesikhalo (petition), inxusa ukuba umengameli ahoxise lo mgomo.
Le ncwadi iqhamuke kwabamele imboni yezokuvakasha; uMnu Randolf Jorberg, uMnu Ebrahim Asmal noMnu David Donde. Njengamanje umgomo ohambisana nomthetho wokuvalwa kwezwe, uphoqa abantu ukuba kusukela phakathi kwamabili (00h00) kuya kwelesine intathakusa, bangabi wuvanzi, babe semakhaya. Abafuna uhoxiswe lo mgomo, bathi abantu sebephile ngaphansi kwawo izinyanga eziwu-21, kanti ngokwesayensi lokhu kuvinjelwa kwabantu ukuhamba ebusuku akunasisekelo sokuthi kunomthelela othile ekunqandeni ukusabalala kweCoronavirus, edala iCovid-19, ngakho kumele kudedelwe abantu babuyele esimeni sempilo ejwayelekile.
Nokho bathi kungenzeka isikhathi sewashi silekelele ekuncishisweni kobugebengu nokuhlukumezeka (trauma reduction), kodwa lokho kuyashayisana nenkululeko yabantu, nomthethosisekelo wezwe. “Siyakunxusa mengameli ukuba wenze okufanele, ube nesibindi, uhoxise umgomo wesikhathi sewashi, futhi usize ukutakula umnotho wethu, ubuyise inkululeko yomphakathi ngo-2022,” kusho abasembonini yezokuvakasha kule ncwadi yesikhalo. Bathi kumqoka ukuba iNingizimu Afrika ithumele umyalezo emhlabeni wonke wokuthi kuvulekile ukusebenza kwamabhizinisi ezweni, kanjalo nezivakashi zivulelekile ukuvakashela ezweni.
IDemocratic Alliance nayo ikhiphe isitatimende ithi umengameli kumele awuqede lo mgomo. “Ukuqeda umgomo wesikhathi sewashi kuyindlela elula nephusile yokuthuthukisa umnotho, ikakhulukazi imboni yezindawo zokudlela nemboni yemicimbi, okuyizona ezithwale kanzima kakhulu ngesikhathi sobhubhane,” kusho umholi weDA, uMnu John Steenhuizen. bhekin@ilanganews.co.za
Previous articleINDLUNKULU NAWENDUDUZO NGOMBHISHOBHI UTUTU
Next articleISIGCOTSHIWE INKOSI YAMANTUNGWA